Tuesday December 06, 2016 - 09:47:14 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya Magaalada Xalab ayaa sheegaya in ciidamada Nidaamka Bashaar Al-asad iyo maleeshiyaadka Ajaanibta Iiraan laga qabsaday illaa laba xaafadood oo isbuucii lasoo dhaafay u gacan galay cadawga.
Mid kamida saraakiisha xoogaga Kacdoonka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in xoogagoodu ay dib ula wareegeen dhul ay horay u khasaariyeen.
Diyaaradaha dagaalka dowladda Ruushka ayaa si ba’an uduqeynaya xaafadaha dhaca Bariga magaalada Xalab taasi oo isbahaysiga Iiraan iyo Bashaar Al-asad u suurtagelisay in ay dhul ballaaran dib u qabsadaan.
Dhinaca kale dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa fashilyay go’aan cusub oo Q.Midoobe ay ka qaadan laheyd dagaallada magaalada Xalab.
Labadan dowladood oo taageeraya xasuuqa shacabka Suuriya ku socda ayaa awoodda Fiitoowga u adeegsaday qaraar lagu dalbanayay joojinta gummaadka lagu haayo dadka ku hareeraysan waqooyiga Suuriya.